Acoustic Neuroma - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Acoustic Neuroma
Acoustic Neuroma ကဘာလဲ။
acoustic neuroma တစ်နည်းအားဖြင့် vestibulaer schwannoma လို့ခေါ်တဲ့ နားအတွင်းနှင့် ဦးနှောက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အာရုံကြောအား ထိခိုက်စေတဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အကျိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအာရုံကြောကို vestibular nerve အကြားအာရုံကြော ဟုခေါ်ပါတယ်။ အကြားအာရုံကြောကို ဝန်းရံတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ acoustic neuroma ကို Schwann ဆဲလ်များ ဟုခေါ်ပါတယ်။ ဒီအကျိတ်ကနေ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ မူးခြင်းနှင့် ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်ခြင်းများကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နားတစ်ဖက်တည်းမှာ ဖြစ်နိုင်သလို နှစ်ဘက်လုံးမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Acoustic Neuroma က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
acoustic neuroma က ဖြစ်ခဲတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာ အသက် ၃၀ မှ ၆၀ လူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Acoustic Neuroma ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လူနာ ၉၀% လောက်မှာ အဖြစ်များဆုံးသောလက္ခဏာကတော့ အကြားအာရုံဆုံးရှူံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ နှေးကွေးပါတယ်။ တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ ဟန်ချက်ပျက်ခြင်းနှင့် နားအူခြင်း(နားထဲမှာ စည်ကနဲ သို့ အသံတစ်သံမြည်နေခြင်း) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ထို့ပြင် အကျိတ်တွေက တဖြည်းဖြည်း အာရုံကြောတွေကို ဖိမိပြီး မျက်နှာမှာ ထုံခြင်းနှင့် တဆစ်ဆစ်ခံစားရခြင်း သို့ မျက်နှာ အကြောသေခြင်း (မျက်နှာအမူအရာမရှိတော့ခြင်း) တို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ အကျိတ်တွေကတော့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊လမ်းလျှောက်မမှန်ခြင်းနှင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသော လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများ ရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာ acoustic neuroma ရဲ့ လက္ခဏာတွေပြနေလျှင် ဆေးရုံတက်သင့် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် ပြပြီး အစမ်းသပ်ခံသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ ရုတ်တရက် အကြားအာရုံဆုံးရှူံးခြင်း သို့ ဟန်ချက်ပြသနာများ၊ မျိုချရခက်ခဲခြင်း၊ တဆစ်ဆစ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ မျက်နှာတစ်ဘက်တွင် တဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေခြင်း အထူးသဖြင့် ၎င်းနှင့် အတူ ခေါင်းမူးခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သို့ တခြားလက္ခဏာတွေနှင့် အတူဖြစ်လာခဲ့လျှင် ဆရာဝန်ခေါ်သင့်ပါတယ်။
Acoustic Neuroma ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Acoustic neuroma ကိုဖြစ်စေတာကတော့ လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာတဲ့ အကြားအာရုံကြောတွေကို ဝန်းရံနေတဲ့ Schwann cells( အကျိတ်လုံးတွေ) ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဆဲလ်တွေ ကြီးထွားလာမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတစ်မျိုးကိုတော့ chromosome 22 မှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကျိတ်ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဟာ ၎င်း မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းချို့ယွင်းစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုတော့ မသိရပါ။ သုတေသီတွေကတော့ acoustic neuroma ဟာ နှစ်မျိုးရှိကြောင်းတွေ့ရှိထားကြပါတယ်။Neurofibromatosis type 1 ကတော့ နားရွက်ရဲ့ တစ်ဖက်ကိုသာလျှင် ထိခိုက်စေပြီး မျိုးရိုးလိုက်၍ဖြစ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ Nerurofibromatosis type2ကတော့ နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးကို ထိခိုက်စေပြီး မိဘနှစ်ပါးဆီမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ type2ကတော့ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေပါတယ်။Acoustic neuroma က ကူးစက်ရောဂါမဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကူးခြင်းမရှိပါဘူး။ သို့သော် ယနေ့ထိတိုင်တော့ acoustic neuroma ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းမတွေ့သေးပါဘူး။
Acoustic Neuroma ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့ သိပ်မရှိပါဘူး။ အဓိက ဖြစ်နိုင်ချေများစေတာကတော့ မိဘတွေဆီမှာ ရှားပါးတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇရောဂါ neurpfibromatosis type2ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေများစေတာကတော့ ကလေးဘဝမှာ ခေါင်းနှင့် လည်ပင်းကို ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု့ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ acoustic neuroma ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ သံသယရှိနေလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသင့်ပါတယ်။
Acoustic Neuroma ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်မှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေလျှင် ဆရာဝန်က လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၊ အာရုံကြောစမ်းသပ်မှုတွေ နှင့် အကြားအာရုံစမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းရောဂါ အဖြေရှာအတည်ပြုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြားအာရုံကြောအကျိတ်ကို အတည်ပြူနိုင်ရန် ဆရာဝန်တွေ အတွက် သံလိုက်ဓါတ်မှန် သို့ ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်တွေ ရိုက်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Acoustic Neuroma ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
acoustic neuroma ကို ကုသခြင်းတွေက အကျိတ်ရဲ့ အရွယ်အစား နှင့် ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှူကို မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာကုသမှုတွေကတော့ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ခွဲစိပ်ကုသခြင်း နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိတ်ရဲ့ အရွယ်အစားသေးနေပြီး ဘာလက္ခဏာတွေမှလည်း မကြုံတွေ့ရလျှင် အကောင်းဆုံးကတော့ စောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ကို ၆လ မှ ၁၂ လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးမှုတွေနှင့် အကြားအာရုံစမ်းသပ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ လက္ခဏာတွေစပြလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ခွဲစိပ်ခြင်းကတော့ နောက်ထပ်ရွေးစရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကျိတ်သေးသေးလေးတွေအတွက်ကတော့ ခွဲစိပ်ခြင်းကတော့ အထိရောက်ဆုံး ကုသမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုကြီးတဲ့ အကျိတ်တွေက ဦးနှောက်နှင့် မျက်နှာ အာရုံကြောတွေနဲ့ ပိုနီးတဲ့အတွက် ခွဲစိပ်မှုက အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။ သင့်ကို နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ တချို့နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့
ခွဲစိပ်ထားတဲ့အနာမှ ဦးနှောက်ကြောရိုးအရည်များ စိမ့်ထွက်လာနိုင်ခြင်း
ဟန်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများ ရှိလာနိုင်ခြင်း
ဦးနှောက်ကြောရိုး အရည်တွင်း ပိုးဝင်နိုင်ခြင်း (ဦးနှောက်ရောင်ခြင်း)
လေဖြတ်ခြင်း သို့ ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ Gamma knife radiosurgery လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ အားပြင်းတဲ့ gamma ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံးပြီး အကျိတ်တွေပေါ်ကို တိတိကျကျ ချိန်ပစ်စေခြင်းဖြင့် အကျိတ်တွေရဲ့ အရွယ်အစားတွေကို သေးစေနိုင်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို တော့ ပိုကြီးတဲ့ အကျိတ်တွေမှာတော့ သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ ဒီကုထုံးကိုတော့ တခါတရံ အသက်ကြီးသူတွေ သို့ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့သူတွေ သို့ နားနှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်စေတဲ့ အကျိတ်ရှိနေသူတွေမှာ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ကုသမှုက သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အကျိတ်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ သင်သိထားသင့်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခွဲစိပ်စဉ်မှာ အကြားအာရုံကြော၊ ဟန်ချက်ထိန်းပေးတဲ့ အာရုံကြော သို့ မျက်နှာ အာရုံကြောတွေကို ဖြတ်လိုက်မိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အောက်ဖော်ပြပါ နေထိုင်မှု အမူအကျင့်တွေနှင့် လူနေထိုင်မှုပုံစံတွေက အာရုံကြောအကျိတ်တွေ ပြန့်ပွားမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
• ဆရာဝန် ရက်ချိန်းတွေကို မှန်မှန်သွားပြပါ။
• ရောဂါအခြေအနေကို သိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုခံယူပြီး စောင့်ကြည့်ကာ သင့်တော်တဲ့ ကုသမှုတွေကို ရွေးချယ်စေပါ။
• ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာပါ။ မညွှန်းထားတဲ့ဆေးတွေကို မသုံးသင့်သလို ဆရာဝန်ညွှန်းထားတဲ့ဆေးတွေကိုလည်း ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ်မရပ်သင့်ပါ။
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print. Page 635.
Acoustic Neuroma. (n.d.).PubMed Health.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001782/. Accessed July 23, 2016.
What is Acoustic Neuroma? (n.d.)Acoustic Neuroma Association.Retrieved on April 3, 2012 fromhttp://anausa.org/index.php/what-is-acoustic-neuroma.Accessed July 23, 2016.